यसरी तयार भयो २८ घन्टामै १० तले भवन (भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । नेपालमा १० तले भवन बनाउन कति समय लाग्ला ? ५ महिना, १० महिना वा १ वर्ष ? तर २८ घन्टामै एउटा १० तले भवन बन्यो भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। चीनमा यस्तै भएको छ। त्यहाँ २८ घन्टा ४५ मिनेट एउटा १० तले भवन निर्माण गरिएको छ। भवन निर्माणको कामका बारेमा खिचिएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालहरु भाइरल बनेको छ। चीनको चांग्शामा बोर्ड ग्रुपले...
काठमाण्डौ । एक केजी आपको मूल्य कति पर्ला ? १ सय, २ सय, ३ सय वा ४ सय । पक्कै पनि एक केजी आपको मूल्य भन्नुपर्दा हाम्रो दिमागमा यी अंकहरु नै आउँछन । तर एक केजी आपको मूल्य ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पर्छ भन्दा के तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ ? हो, एक केजीको मूल्य ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पर्ने आपको सुरक्षाका लागि भारतमा ३ वटा गार्ड र ९ वटा कुकुरलाई २४ सै घण्टा तैनाथ...
काठमाण्डौ । मानिसहरुको जिज्ञासु स्वभाव र मानव जगतको भलाई उन्नति र विकास गर्ने उत्कट चाहनाका कारण विज्ञान क्षेत्रमा तीव्र प्रगति देखिएको छ । विभिन्न वैज्ञानिक चमत्कारका कारण सामान्य रुपमा असम्भव जस्ता देखिने/सुनिने कुराहरु पनि सम्भव भएका छन् । अहिले चीनका वैज्ञानिहरुले पनि यस्तो गरेर देखाईदिएका छन् जसको बारेमा कल्पना गर्न समेत गाह्रो...
काठमाण्डौ । जलवायु परिवर्तन संकटबीच अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले सन् २००५ को तुलनामा पृथ्वी दुईगुणा गर्मीको चपेटामा परेको चेतावनी दिएको छ। नासाले गर्मी अप्रत्याशित रुपले बढेको जनाएको छ। नासा र नेसनल ओसेनिक एन्ड एटमोस्फेरिक एडमिस्ट्रेसनले आफ्नो रिपोर्टमा ऊर्जा असन्तुलन वर्ष २००५ देखि २०१९ बीच दुईगुणाले बढेको जनाएको छ। यो...
सीइओ बन्ने कुनै छिटो बाटो छ ?यस्तो छ १० वर्षे अध्ययनको निश्कर्ष
काठमाण्डौ । व्यवसायिक जागिरे जीवनका क्रममा कसैको करिअर राम्रो ढंगले अघि बढ्छ भने कसैको लामो समय लाग्छ वा एकै स्थानमा रोकिन सक्छ । सामान्य रुपमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो करिअर बनाउनुअघि एमबीए प्रोग्राममा सहभागी हुने र कुनै प्रतिष्ठित संस्थामा उच्च पदको जागिर खाने र जोखिमहरुलाई पन्छाउँदै चुचुरोमा सिधै पुुग्ने सिंढी चढ्ने आम मानिसको...
एक भाग्यमानी व्यक्तिको अद्भुत कथा, जसलाई ह्वेलले निल्यो अनि फेरि ओकलिदियो
काठमाण्डौ । समुन्द्रमा झिँगे माछा सङ्कलन गर्ने काम गर्दै आएका माइकल प्याकर्डले आफूलाई कसरी ह्वेलले निलेपछि फेरि बच्न सफल भए भन्ने पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको म्यासाचुसेट्सको प्रोभिन्सटाउन शहर नजिकै समुन्द्रमा गोता लगाइरहेका बेला विशाल जीव ह्वेलको मुखभित्र करिब ३०- ४० सेकेन्ड परेको प्याकर्डले बताए। त्यसपछि...
कोरोनाविरुद्धको खोपले शरीरमा चुम्बकीय शक्ति विकास भएको दाबी, यस्तो सम्भव छ ?
काठमाण्डौ । कोरोना खोपको साइड इफेक्टका विषयमा निकै चर्चा हुने गरेको छ। कसलाई खोप लगाएपछि ज्वारो आउने, कसैलाई शरीर दुःखने, कसैलाई बान्ता हुनेजस्ता समस्या देखिने गरेको छ। यस्ता समस्या आएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिन पनि भनिएको छ। भारतको नासिकमा एउटा अचम्मको घटना भएको छ। त्यहाँका अरविन्द सोनार नाम गरेका एक व्यक्तिले आफूले कोरोनाविरुद्धको...
काठमाण्डौ। विश्वमा अहिले कोरोना महामारीले निकै सताएको छ। यसले विश्वभर स्वास्थ्य संकटसँगै आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना गरेको छ। महामारी रोक्न लगाइएका प्रतिबन्धका कारण व्यापारव्यवसाय र उद्योगधन्दा बन्द हुँदा करोडौँ मानिसको बिचल्ली भएको छ। मानवजीवन नै संकटमा परेको समयमा बस्नका लागि कहाँ सुरक्षित स्थान छ भन्ने पनि हु�...
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनेलाई एक खिल्ली गाँजा उपहार
काठमाण्डौ । कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न स्थानमा नयाँ–नयाँ तरिका अपनाउन थालिएको छ। यही क्रममा आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाको वासिङ्टन राज्यले एउटा अनौठो उपाय निकालेको छ। यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाएबापत गाँजाको एउटा खिल्ली उपहार दिने घोषणा...
काठमाण्डौ । सधैँ अरुको घरमा डेरा गरी बस्ने चाहना कसैको पनि हुँदैन। प्रायः सबैको आफ्नै एउटा घर होस् भन्ने सपना हुन्छ। तर आफ्नै घरको सपना त्यति सजिलै भने पूरा हुन सक्दैन। अधिकांशले पैसाकै कमीका कारण आफ्नै घर बनाउने सपना पूरा गर्न सक्दैनन्। यदि तपाइँ पनि आफ्नै घर सपना पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पैसा महत्वपूर्ण हुन्छ। पैसाका साथै घर किन्दा...
अचम्मको जिव, जसको बान्ता नै प्रतिकिलो एककरोड बढीमा बिक्री हुन्छ !
काठमाण्डौ । कुनै जनावरको बान्ता वा उल्टीको मूल्य करोडौँ रुपैयाँ पर्न सक्छ भनेर तपाइँले कहिल्यै कल्पना गर्नु भएको छ ? अथवा यो प्रति किलो एककरोड रुपैयाँ बढीसम्म बिक्री हुनसक्छ भनेर कल्पना गर्नु भएको छ ? पक्कै पनि यस्तो हुनसक्छ । यदि त्यो उल्टी स्पर्म ह्वेलको हो भने । भारतको अहमदाबाद प्रहरीले हालै स्पर्म ह्वेलको साढे पाँच किलो बा�...
मुकेश अम्बानी कसरी बने विश्वका धनाढ्यमध्ये एक? यस्तो छ एउटा कोठाबाट आलिसान महलसम्मको रोमाञ्चक यात्रा
काठमाण्डौ । छिमेकी मुलुक भारतका व्यवसायी मुकेश अम्बानी विश्वका धनाढ्यमध्ये एक हुन्। रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशन अम्बानीले व्यवासयका विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हात पारेका छन्। उनको व्यवसायको क्षेत्र भारतमा मात्रै नभई अन्य देशहरुसम्म विस्तार भएको छ। मुकेश अम्बानीको सफलतालाई पछ्याउँदै उनीजस्तै बन्ने सपना...
चीनले तयार पर्यो वास्तविकभन्दा १० गुणा बढी शक्तिशाली 'कृत्रिम सूर्य', कति होला तापमान ?
काठमाण्डौ । चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले तयार पारेको कृत्रिम सूर्य वास्तविक सूर्यभन्दा १० गुणा धेरै शक्तिशाली भएको रिपार्ट सार्वजनिक भएको छ। वेबसाइट मिररको रिपार्टका अनुसार हालै सक्रिय भएपश्चात चीनको कृत्रिम सूर्यको तापक्रम वास्तविक सूर्यभन्दा १० गुणा अधिकसम्म पुुगेको छ। स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा १०० सेकेन्डका लागि कृत्रिम सूर्य...
यो देशमा छैन एउटा पनि लामखुट्टे, कारण थाहा पाएर छक्क पर्नुहुन्छ
काठमाण्डौ । विश्वभरका मानिसहरु लामखुट्टेको आतंकबाट हैरान हुने गरेका छन्। विभिन्न गम्भीर रोगहरुका कारक लामखुट्टेबाट बच्नका लागि मानिसहरुले अनेक उपायहरु अपनाउने गरेका छन्। तर हामी तपाइँलाई एउटा यस्तो देशका बारेमा बताउँदैछौँ, जहाँ खोजेर पनि लामखुट्टे पाइँदैन। यो देश हो, उत्तर एटलान्टिक महासागरमा अवस्थित आइसल्यान्ड। वर्ल्ड एट्लसका...